Q: Olee otú ị pụrụ ekwe nkwa Good Quality anyị natara?
A: Firstly, Anyị nwere QC ngalaba maka Quality akara si Raw ihe ruo okokụre ngwaahịa. Nke abuo, Anyị ga-eme Inpsection n'oge mmepụta na mgbe Production. Thirdly, All anyị ngwaahịa ga-anwale tupu i bulie na-ezipụ ndị na. Anyị ga-eziga Nnyocha ma ọ bụ ule video ma ọ bụrụ na ahịa na-abịa maka ịlele personly.
Q: Gịnị banyere warrenty?
A: All anyị Products enwe 1 afọ warrenty na Life-Long Mmezi ọrụ. Anyị ga-enye gị free oru nkwado.
Q: Ọ ị na-enye ọ bụla enyemaka n'ihe banyere Products Operation?
A: All ígwè ọrụ n'ime ngwaahịa mmeghe, Akwụkwọ ntuziaka na Bekee nke na-enwe ihe niile na-arụ ọrụ aro na Mmezi amụma n'oge iji. Ka ọ dịgodị, anyị nwere ike na-akwado gị na ndị ọzọ ụzọ, ka nye gị Video, Gosi na-akụziri gị mgbe ị nọ na anyị factory ma ọ bụ anyị injinia gị factory ma ọ bụrụ na rịọrọ.
Q: Olee Otú m ga-esi akụkụ ahụ mapụtara?
A: Anyị ga-itiba ụfọdụ ngwa ngwa wear akụkụ na gị na iji, dị ka nke ọma ụfọdụ dị mkpa ngwá ọrụ maka nke a igwe nke bụ free ga-eziga ọnụ wtih gị Order na a ngwá ọrụ igbe. Anyị niile akụkụ ahụ mapụtara na-eru n'ime Manual na a ndepụta. I nwere ike na-agwa anyị gị akụkụ ahụ mapụtara Mba ga-eme n'ọdịnihu. Anyị nwere ike na-akwado gị niile. Ọzọkwa, maka beveling igwe egbutusị bevel ngwá ọrụ na inserts, Ọ bụ ụdị comsumable maka ígwè ọrụ. Ọ mgbe niile rịọ mgbe ụdị nke nwere ike easyly chọta na obodo ahịa n'ụwa nile.
Q: Gịnị bụ gị nzipu Ụbọchị?
A: Ọ na-ewe 5-15 ụbọchị mgbe ụdị. Na 25-60 ụbọchị n'ihi na ahaziri igwe.
Q: Olee Otú m ga-esi nkọwa ndị ọzọ banyere nke a igwe ma ọ bụ silimars?
A: PLS dee gị ajụjụ na chọrọ na n'okpuru ase igbe. Anyị ga-elele na zaghachi gị site Email ma ọ bụ ekwentị na 8 Awa.